Umbala weCarnations Practice Science Experiment
Ukusebenzisa umbala wokutya kwindawo yebhotile yamanzi ukutshintsha umbala weempawu
Uvavanyo oluya ekhaya okanye esikolweni lubonisa umntanakho indlela amanzi ahamba ngayo kwientyatyambo ukusuka kwisiqhelo ukuya kwiifalesi, ukutshintsha umbala weempawu. Ukuba uke wakha izimbali kwi-vase ejikeleze indlu, umntwana wakho usenokuba wawabona amazinga amanzi ehla. Umntwana wakho unokuzibuza ukuba kutheni ufanele uhlale unisela amanzi. Uphi na amanzi onke?
I-Coloring Carnations Science Experiment inceda ukubonisa ukuba amanzi aphelelanga nje.
Ngaphezulu, ekugqibeleni, uya kuba neentyatyambo ezintle kakhulu zeentyatyambo.
Izinto eziza Kufuneka
Imibala emhlophe (1 ngombala ngamnye ungathanda ukuzama ukudala)
iibhotile zamanzi ezingenalutho (1 ngamnye kwi-carnation)
Iiyure ezingama-24 ukuya kuma-48
Umbala weMpawu zokuBhalisa iShidi
Izikhokelo zokuLungisa imiSebenzi yokuCwangcisa
Gweba iilebula kwiibhotile zamanzi uze ugcwalise ibhotile nganye malunga neyesithathu ezele amanzi.
Yenza umntwana wakho anonge umbala wokutya kwibhotile nganye, malunga ne-10 ukuya kwe-20 ehla ukuze wenze umbala ube mnyama. Ukuba unqwenela ukuzama ukwenza imvula yobuncwane bombhalo, wena kunye nomntwana wakho kuya kufuneka udibanise imibala ephambili ukuze wenze umbala okomfusa ne-orange. (Iibhokisi ezininzi zokubala umbala ziquka ibhotile eluhlaza.)
Sika i-stem ye-carnation nganye kwi-angle kunye nendawo kwindawo nganye kwibhotile yamanzi. Ukuba umntwana wakho ufuna ukugcina idayari yezinto ezenzekayo kwiimifanekiso, khuphela kwaye uprinte iShidi lokuRekhoda lokuBhala imiCwecwe yokuBala imibala uze udwebe umfanekiso wokuqala.
Hlola ukubhalwa kweeyure zonke iiyure ezimbalwa ukuze ubone ukuba nantoni na eyenzekayo. Eminye imibala eqaqambileyo ingaqala ukubonisa iziphumo ezincinane kangangeeyure ezimbini okanye ezintathu. Xa uqala ukubona iziphumo ezibonakalayo, lixesha elifanelekileyo lokuba umntwana wakho athathe umfanekiso wesibini. Khawukhumbule nje ukurekhoda ukuba zingaphi iiyure eziye zahamba!
Gcina iliso kwiintyatyambo ngemini. Ekupheleni kosuku olunye, iintyatyambo kufuneka zithathe umbala. Kulixesha elihle lokubuza umntwanakho imibuzo malunga noko akujongayo. Zama imibuzo malunga nomgca:
Nguwuphi umbala osebenza ngokukhawuleza?
Nguwuphi umbala ongabonakali kakuhle?
Kutheni ucinga ukuba iimpawu zijika imibala? (jonga inkcazo ngezantsi)
Uphi umbala oboniswayo?
Ucinga ukuba kuthetha ntoni malunga neendawo zeentyatyambo ezifumana ukutya kakhulu?
Ekupheleni kolu vavanyo (mhlawumbi olunye okanye iintsuku ezimbini, kuxhomekeke kwindlela enamandla ofuna ukuba iintyatyambo zakho zibe nazo) ziqokelele izibhengezo kwisiqhamo esinye. Kuya kubonakala ngathi umlobo!
Ishicilelo sokurekhoda ye-Coloring Carnations Science Experiment
Yenza ibridi yebhokisi ezine kumntwana wakho ukudweba imifanekiso yento eyenzekayo kuvavanyo.
Emva kwama-__ iiyure
Emva kosuku lokuqala:
Ziziphi iintyatyambo zam ezibonakala ngathi:
Kutheni Iimpawu Zitshintsha Umbala
Njengazo naziphi na ezinye izityalo, ama-carnations afumana izondlo zabo emanzini abamba ukungcola atyaliweyo kuwo. Xa iintyatyambo ziqingqiwe, azinasiphelo kodwa aqhubeke efumanisa amanzi ngokusebenzisa iziqu zazo. Njengoko amanzi aphuphuma kumagqabantshintshi kunye neepalal of the plant, "iyanamathela" kwezinye iamolekyuli zamanzi kwaye idonsa ukuba amanzi kwindawo eseleyo.
Amanzi kwi-vase akhupha isiqhamo seentyatyambo njengesitya sokusela kwaye sisasazwa kuzo zonke iinxalenye zesityalo ezifuna amanzi namhlanje. Ekubeni "izondlo" emanzini zidayiwe, idayi ihamba i-stem yentyatyambo.
I-Easy Crystal Growing Recipes
Ungasusa njani ityuwa ukusuka kwamanzi?
Recipe Glitter Recipe
Ukuchonga umxube ongaqhelekanga weMichiza
Fumana i-Bismuth ye-Metal kwi-tablet ye-Pepto-Bismol
Iimvumba ezikhazimulayo nezokutsha
Yenza i-Sugar kunye ne-String Crystal Easter Eggs
Indlela yokulungisa ngokufanelekileyo iSitulo somqhubi
Izakhiwo kwiZero Zero
Yiyiphi imfutho kwiQela leGalofu, kwaye yintoni eSebenzayo?
IWedston-Salem State Admissions
I-Oklahoma Panhandle State University Admissions
Izinto ezi-5 zokumazi nge-Gymnast Lilia Podkopayeva
Iintlobo Zemijelo Yomkhumbi
Iintsuku zeeNgesi zeveki zifumana amagama abo
Ama-anyanisi anamafutha kunye neFlu
Indlela yokufunda kwi-Midterm
URobert Benchley malunga nendlela yokuphepha ukuBhala
Iingoma eziPhambili ze-Hip-Hop zokuPhumela kweSikolo esidala
Iikhompyutha ezi-7 eziphambili zeeBhayisike ze-Bike zokuthenga ngo-2018
Indlela yokukhusela iSommbe
Imfazwe YaseMerika: Imfazwe yaseRaymond
Iingoma ezili-10 ezidumileyo ngeengelosi
I-Cup ye-Elijah kunye neMiriam Cup ngexesha lePasika yePasika